Covid - 19 ကို ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ - Shop
Covid – 19 ကို ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ0258
The KaungHtet March 25, 2020 11:21 am March 25, 2020
Covid 19 ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါအနေနဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းစိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ သေချာဂရုတစိုက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင် ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါပါ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့
၁။ အပြင်မထွက်ပါနဲ့! လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါ!
အခုအချိန်မှာ Social Distancing ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ မလိုအပ်ပဲ အပြင်မထွက်တဲ့ နည်းလမ်းကို အားလုံးက လိုက်နာကျင့်သုံးနေပါပြီ။ ဒီနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် သင်ရော၊ သင့်မိသားစုကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
၂။ မျက်နှာကို လက်နဲ့ မထိပါနဲ့
လက်မှာမမြင်ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလက်နဲ့ မျက်နှာကိုကိုင်မယ်ဆို ရောဂါပိုးတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ နေမကောင်းတဲ့ သူနားကို မကပ်ပါနဲ့။
နေမကောင်းတဲ့သူနဲ့ အနည်းဆုံး ၃ ပေအကွာမှာ နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးကထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကတဆင့် ရောဂါကူးစက်ခံရတာမျိုး မရှိမှာပါ။
၄။ နေမကောင်းရင် စောစောစီးစီး ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင် စောစောစီးစီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ နေမကောင်းရင် အိမ်မှာပဲနားနေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ လက်ဆေးဖို့ပါပဲ။ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာသုံးပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ အရက်ပြန်ပါတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည် သုံးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် စက္ကန့်၂၀ကြာလက်ကို သေချာဆေးကြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ သင့်လက်မှာ ကပ်နေတဲ့ ပိုးမွှားတွေက သေဆုံးသွားမှာပါ။
အားလုံးပဲ အိမ်နေမှာနေပြီး Shop ကနေ ဈေးဝယ်လိုက်ပါ!
Previous ArticleSocial Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြNext Articleသင့်ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး အချိန်တွေကုန်ဆုံးမို့ဆိုရင် တန်ဖိုးရှိစွာ ကုန်ဆုံးစေမို့က အဓိကပါ …